Ukuhlaziywa ubisi lwebele: izindlela, izindlela zokuhlaziya kanye nezincomo
Ubisi lwebele lungukudla kokuqala okungena emzimbeni wengane esanda kuzalwa. Kuyinto ewuketshezi oluthile olukhiqizwa yizicabha zamantombazane omama. Kunezimo ezidinga ukuhlaziywa kobisi lwebele, ukuze kunqume izinkomba zayo ezifanele futhi uqiniseke ukuthi ukungabi khona kwamagciwane ezincane ezithintekayo ekubunjweni.
Izinsuku ezimbalwa zokuqala emva kokuzalwa kwengane ezivela ezinkanjeni zamantombazane zabomama abelwe ubisi, kodwa i-colostrum. Kuyinto enomsoco futhi ikhulu kakhulu. Ngosizo lokugcoba umzimba womntwana ugcwele microflora ewusizo futhi uvumelane nemvelo yangaphandle.
Unomphumela we-laxative, ukhuthaza ukuphola ngokushesha komzimba wengane ngemuva kokudla kwegazi, kudala isimiso somzimba sokuzivikela esinamandla, sinomzimba omkhulu wamaprotheni, i-immunoglobulins ne-ascorbic acid.
Eqinisweni, ubisi livela ezinsukwini ezingu-3-5 emva kokuzalwa komntwana. Ukwakhiwa kwalo:
Amanzi - kufika ku-85%;
Amaprotheni - kufika ku-1%;
Amafutha - kufika ku-5%;
Ama-carbohydrates - cishe angu-7%;
Izinto ezisebenzayo ze-hormonal;
Ama-Macro kanye nama-microelements;
Ukwakhiwa kobisi lwebele kuhlukahluka kuye ngokuthi uneminyaka engakanani ingane. Kuze ezinyangeni eziyisithupha umntwana unesidingo esikhulu samafutha namaprotheni, okuyinto eyancipha ngemva kokufinyelela ezinyangeni ezingu-6. Ngakho, ubisi uba ngamafutha angaphansi, inani lamaprotheni linciphisa. Ngokufanayo, kunokwanda kwama-carbohydrates, amaminerali, okudingekayo ukuze kusetshenziswe ngendlela efanele isistimu ye-musculoskeletal neyeserving.
Kwacatshangwa ukuthi ubisi lukanina lwaluphelile, kodwa izifundo eziningi ziye zabonisa ukuthi iqukethe izinhlobo ezincane ezingenayo amathuba ezincane ezikwazi ukuhlala esikhunjeni, emanzini, emathunjini omzimba ngaphandle kokulimaza. Ngaphansi kwezimo ezithile, isibonelo, esimweni sokunciphisa ukuzivikela, lapho i-supercooled, esikhathini sokugula esithathelwanayo, amabhaktheriya abe yi-pathogenic microorganism, eqala ukuphindaphindiwe ngenkuthalo.
Lapho lo mnyango ungena emzimbeni womntwana ngenkathi usondla, uphazamisa ukuthuthukiswa kwezifo eziningi:
Izifo zokuvuvukala zesikhumba kanye nezibungu zamangcwaba;
Indlela yokubona i-pathogen?
Ukucacisa uhlobo kanye nohlobo lwezilwane eziphilayo ezivusa ukuthuthukiswa kwezimo zezempilo emntwaneni, kungenzeka uma udlulisa ubisi lwebele kuze kuhlaziywe. Lokhu kuhlolwa okuqondile okuvumela ukuthi kungabonakali kuphela ukutholakala kwe-pathogenic microflora, kodwa futhi ukucacisa ukuzwela kwayo emithini yemithi elwa namagciwane.
Ubisi lwe-Breast for analysis ukunikeza bonke abesifazane abancancisayo, akudingi. Isiboniso ukusola kokutholakala kwezinqubo ezithathelwanayo emzimbeni womntwana kanye nezimo ezivuthayo ezivela ezigulini ezincelisayo zomama.
Ukuhlaziywa ubisi lwebele kuqhutshwa ezimweni ezilandelayo:
Ukuqhaqhaqhaza kanzima esikhumbeni somntwana;
Ukuvela njalo ukungcola kwe-mucus kanye nokufakwa okuluhlaza okwesibhakabhaka emanzini omntwana;
Izimpawu zesimiso sokuvuvukala esiswini somama we-mammary (ubuhlungu, i-hyperemia, umkhuhlane, ukutholakala kocucu oluphuma emzimbeni);
Ukuzuza okuphansi kwesisindo kwengane kuhlanganiswe neminye yemibandela engenhla.
Imithetho yokuqoqa ubisi
Ukuze udlulise ukuhlaziywa kobisi lwebele, kufanele ulandele imithetho ethile uma uyiqoqa:
Lungisa isitsha sezinto. Lokhu kungathengwa kwiikhampu ezikhethiwe zekhemisi noma izimbiza zeglasi, kepha ngaphambilini ziphekwe ngamabhodlela.
Ukuze isifuba ngasinye kufanele sibe nesitsha esisodwa esibekiwe.
Geza izandla zakho nesifuba ngensipho.
I-10 ml yokuqala kufanele iboniswe ngokwehlukana, njengoba ingasetshenziselwa ucwaningo.
Okulandelayo, 10 ml kusuka gland ngayinye ukuveza ezitsheni ezihlukene futhi ngokuqinile uvale izingubo.
Ukuhlaziywa kobisi lwebele kuzoba nemiphumela eveza kakhulu, uma ngabe imininingwane ihanjiswa ebhokisatri engakapheli amahora amabili ngemuva kokuqoqwa kwayo. Ngokujwayelekile umphumela usulungile ngesonto.
Ukudla ekunqumeni kwama-microorganisms ebisi
I-World Health Organization ayicabangi ukuthi kukhona izinambuzane ezincane ze-pathogenic ebusweni likamama njengesibanga sokwenqabela ukuncelisa, ngoba zonke lezi zigciwane zikhuthaza ukukhiqizwa kwamagciwane okuvela emzimbeni wesifazane, futhi nazo zingena emgodleni wokugaya, zivikele.
Endabeni yamagciwane, kodwa ukungabi khona kwezinqubo zokuvuvukala kumama, ukuncelisa kubhekwa njengokuphephile.
Uma i-staphylococcus itholakele, izidakamizwa zokulwa namagciwane zinqunywa kumama, kuyilapho okuncane kunobuthi (preferred cephalosporins, macrolides, penicillins). Ngesikhathi sokuthatha ama-antibiotiki, umntwana unconywa ukuba afake esifubeni esinempilo, ehlaziya njalo isiguli.
Uma kutholakala izimpawu zokutheleleka kwe-staphylococcal, bobabili umama nengane banikezwa ukwelashwa kokubili. Inqubo yengane yomntwana ibonakala kulokhu okulandelayo:
I-Conjunctivitis - amehlo omuncu, kukhona ukuphuma kwe-purulent emagumbini, okuhambisana nokuvuvukala nama-hypermia;
I-Omphalitis - ukukhukhumeza nokubomvu kwendwangu, ukutholakala kokuphuma kwegazi;
Staphyloderma - vesicles esikhumbeni esinokuqukethwe okuhlanzekile, ezungezwe i-whisk ye-hypermic;
I-enterocolitis - i-liquid stool kuze kube izikhathi ezingu-10 ngosuku, indwangu ene-mix of blood kanye ne-mucus, ubuhlungu besisu, isicashu, ukuhlanza.
Ukuhlaziywa ubisi lwebele kungaba nezinketho ezine ezilandelayo:
Akukho ukukhula kwe-microflora. Umphumela onjalo awunqabile, ngoba ezimweni eziningi ubisi abuyinto eyinyumba.
Ukuba khona kwe-microflora ngokwemvelo ngokwezinto ezamukelekayo. Lokhu kusho ukuthi ebisi kunezinhlobo ezincane zama-microorganisms ezingaba yingozi emzimbeni womama nengane.
Ukuba khona kwe-microflora ye-pathogenic ngenani lamakholoni kungaphansi kuka-250 cfu / ml. Lokhu kusho ukuthi izitshalo eziyingozi zihlwanyelwe, kepha izinga labo lingaphakathi kwemingcele yesikhombimkhuba, okusho ukuthi iphephile.
Ukutholakala kwe-microflora ye-pathogenic ngenani lamakholoni kunama-250 cfu / ml. Lolu khetho ludinga ukwelashwa nokulahlwa kokuncelisa.
Kulabo abamele amagciwane, okulandelayo kungadalwa:
Noma yiziphi izinkomba eziboniswa ngendlela yokuhlaziywa, ukwelashwa kwemiphumela kufanele kwenziwe ngudokotela oya khona.
Ukuhlaziywa kokunqunywa kokuqukethwe kwamafutha
Okuqukethwe kwamafutha kuyisibonakaliso esibalulekile lapho i-saturation nenhlalakahle yengane incike khona. Ukungaqiniseki kwalo kuholela ekutheni ingane ayitholi isisindo somzimba, futhi okuqukethwe okunamafutha aphezulu kungaba yinkinga ye-dysbiosis.
Ukuze uthole umphumela olungile kubalulekile ukuqoqa ubisi "emuva". Lesi yisisindo somzimba esiya emzimbeni wengane emva kwe "front", equkethe inani elikhulu lamanzi ne-lactose. Ubisi buphathwa nge-sulfuric acid, okubangela ukushisa kwamafutha. Izinga lamafutha lizimisele ukusebenzisa i-butyrometer. Ukuhlaziywa ubisi lwebele ngokuqukethwe kwamafutha kunamagugu alandelayo: 3.5-3.8%.
Kukhona izibalo eziningi zobisi lwebele ukuze kunqume izinkomba ezinobulunga nezokulinganisela kokubunjwa:
Ukulinganiswa komonakalo othile;
1. Ukunqunywa kokunciphisa ubisi lwebele
Izinkomba zikhomba isilinganiso samaphrotheni namafutha. Kuncike ekutheni ubisi oluvuthiwe, izibalo zingahluka kanjani. Izinto zokufunda ziqoqiwe amahora angu-1-1.5 ngemva kokuba ingane isondliwe. E-laboratory, ubisi luthululwa kwi-vial glass futhi igxila kuwo nge-hydrometer. Ukuhlolwa kwemiphumela kuncike ekushiseni kwegumbi lapho isifundo senziwa khona.
Izindinganiso ezijwayelekile ziyi-1,026-1,036, uma ngabe izinga lokushisa lingama-15 ° C. Lapho izinga lokushisa likhuphuka noma liphansi ngezinga ngalinye, i-0.001 ingeziwe noma isuswe kwimiphumela, ngokulandelana.
2. Izinga lama-antibodies ebisi lwebele
Izinga lama-immunoglobulin ebisini likamama lihlukile ezikhathini ezahlukene zokuphila kwengane. Ezinsukwini zokuqala emva kokuzalwa, kuyilapho izinhlayiya ze-mammary ziveza i-colostrum, inani le-immunoglobulin A likhulu kakhulu. Iyancipha ekupheleni kwesonto lokuqala futhi igcina kule nqanaba ngezinyanga ezingu-8-10.
Amanani angabalulekile aqukethe i-immunoglobulins M, G, i-interferon, i-interleukins, i-macrophages, i-lymphocytes.
Lapho kufanele uhlaziye ubisi lwebele
Izifundo zenziwa ema laboratories ezizimele. Izindleko zabo kuxhomeke endleleni esetshenzisiwe kanye nobuchwepheshe obusetshenzisiwe. Unganikeza lokho okuzenzekelayo noma ngokuncoma kukadokotela oye wacela ukuthunyelwa ukuhlaziywa. Ubisi lwebele, ubuhlungu obubaluleke kakhulu kumama, luyingxenye ebalulekile yokwenza impilo yengane yesikhathi esizayo, okusho ukuthi yonke imizamo kufanele yenziwe ukuze kugcinwe i-lactation ngangokunokwenzeka.
Isifo sofuba ezinganeni: izimbangela, izimpawu, ukwelashwa nokuvimbela
Hypotension: ukwelashwa kwesifo
Odokotela neziguli bavumelana, beshiya okuhle mayelana nokubuyekezwa kwezidakamizwa ze-Grandaxin
Indlela yokubala isisindo esivamile ngokukhula kwe-170 cm? Isisindo esihle ngokusho kokuphakama nobudala
Idatha eyisisekelo ye-anthropometric
Ukuskena kwe-Duplex ekuxilongweni kwezifo ze-vascular
Umbhede "Dolphin" kanye namabhokisi: Izibuyekezo abazali
"Danabol": kanjani ukuthola, izinzuzo, Izimo kanye nokubuyekeza
Wedding Peach: imithetho umdwebo nesithombe
"Piracetam" noma "Nootropil" - okuyinto engcono? Uyini umehluko phakathi "nootropil" futhi "piracetam"?
Indoor lemon zikagamthilini: incazelo, izici kulinywe ekhaya
Skyrim: isikhali. Isikhali best Skyrim umdlalo
Indlela yokwenza Welding oscillator ngezandla zakho?
LaseGranada: ukuthi kuyini nokuthi ungayisebenzisa kanjani?